Gareth Bale Oo Lagu Eedeeyay Inuu Isku Dayay Inuu Dhaawaco
By axadle Last updated Jul 17, 2020
Gareth Bale ma uusan ciyaarin Is-aaragii at Real Madrid ku xaqiijisatay hanashada horyaalka La Liga ee ay ka badiyeen Villarreal, laakiin waxaa si weyn loogu hadal hayaa baraha bulshada ka dib falkii uu ku kacay ciyaarta ka dib.
Xiddiga reer Wales ayaa qabsaday warbaahinta Spain ka dib markii kaamirada ay qabatay isagoo canqowga ka haraantinaya xiddigaha Real Madrid waqtigii dabaaldega, waxa uu sidoo kale ku guuldareystay inuu ku biiro xiddigihii kor u tuurayay tababare Zinedine Zidane.
Los Blancos ayaa guuleysatay koobkeedii 34aad ee horyaalka Spain taasoo ah rikoodh aan kooxna u soo dhaweyn ka dib markii ay 2-1 kaga badiyeen Villarreal.
Laakiin Bale oo 31 sanno jir noqday maalintii uu noqday xiddig labo jeer qaaday horyaalka La Liga ayaan ku jirin xaalad dabaaldeg isagoo ku guuldareystay inuu kursiga keydka ka soo kaco Is-aaragii lixaad oo isku xigta.
Wuuna soo bandhigay caradiisa isagoo diiday inuu ka qeyb qaato dabaaldegii ay xiddigaha Real Madrid la sameyeen tababare Zizou inkastoo uu u dhawaa macalinka reer France.
Bale ayaa muran dhaliyay isbuucii la soo dhaafay markii lagu sawiray isagoo hurdo Is-aaragii ay la ciyaarayeen Alaves ka hor inta uusan ciyaar ciyaar ku sameynin kursiga keydka Is-aaragii Granada.
Isagoo weli soo bandhigaya sida uu uga careysan yahay xaalada uu ku jiro, xiddigii hore ee Tottenham ayaa muuqaal laga duubay isagoo aan si wanaagsan ugu dabaaldegeynin hanashada horyaalka La Liga.
Mid ka mid ah muuqaladii laga duubay ayaa muujinaya isagoo isku dayaya inuu kufiyo asxaabtiisa kooxda ee dabaaldegeysay isagoo ka haraantinayay canqowga.
Taageere feker ka dhiibtay muuqaalka ayaa yiri: “Muxuu sameynayaan Bale, ninkaan waa wax kale”
Taageere kale ayaa yiri: “Haha wuxuu isku dayayaa inuu qaar dhaawaco haha waa nin shactiro badan waan jeclahay.”
Mid kale ayaa yiri: “Waxaan u maleynayay inaan aniga kaliya arkay. Wuxuu u sameynayaa inuu mid dhaawaco si shaxda loogu soo bilaabo”
Mid kale ayaa soo qoray: “Ninkaan maskaxdiisa ma fiyooba”
Taageere kale ayaa yiri: “Dhaawac ciyaartoyda kale si Zidane ay qasab ugu noqoto inuu ku ciyaarsiiyo. Waa caqli”